Raha tsiahivina dia ny 07 aogositra 2020 ity karana mpanao bois de rose ity no nangataka tamin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo, na samy monina any Antalaha aza ny mpitory sy ny toriana, mba hanageja ny vola any amin'ny banky sy ny fananan'i Solombavam-bahoaka teo aloha Jaovato, fa nolazainy tsy nahaloa ny volany izay tombanany any amin'ny 1 585 408 000ar.
Raha nahazo rariny tany amboalohany ity mpandraharaha karana ity, dia resy hatrany izy tamin'ny fanoherana nataon'i Jaovato, izay nanamafy fa tsy mbola nanao fifampiraharahana tamin'ity karana ity, ka dia nandresy hatrany moa ity mpandraharaha manana ny lazany ao amin'ny farira SAVA ity.
Raha ny angom-baovao avy any an-toerana dia fantatra ihany koa fa tsy i Jaovato irery no notorian'ity karana ity nilazany tamin'ny Tribonaly fa namarotany andramena fa misy mpandraharaha hafa ihany koa.
Ny ahiahin'ny maro izany dia sao entina hiarovan-tena amin'ny mety fanjavonan'ireo bois de rose marobe miisa 11 971 rondins sy 5 028 plaquettes de bois de rose amina miliara maro ity fitoriana etsy sy eroa ity, satria dia izy tenany ihany no miampanga-tena teo anivon'ny fitsarana, tamin'ny alalan'ny taratasy nataony, niaraka tamin'ny mpisolo vava azy ny 07 aogositra 2020, fa namarotra sy nitatitra andramena izy tamin'ny volana novambra 2012 sy volana aprily 2013, fotoana izay efa noraran'ny didy hitsivolana 2011-001 ny 08 aogositra 2011 fa mampigadra 2-5 taona an-tranomaizina ny famarotana na fitaterana izany hazo saro-bidy izany.
Raha nanao ny adidiny izany ny Tribonaly eto Antananarivo, dia andrasana izany ny eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana anamarina ny andramena izay mbola nogiazana any amin'ireo mpandraharaha momba ny hazo saro-bidy ireo, araka ny fanambaràna nataon'izy ireo avy, indrindra fa ny an'ity karana izay nitonon-tena tany amin'ny fitsarana ity fa mbola namarotra sy nitatitra bois de rose ny taona 2012 sy 2013, izay efa tafiditra anatin'ilay fotoana nandraràna ny famarotana bois de rose.
Andrasana ihany koa ny eo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola satria tsy hita ao anatin'ireo lisitr'ireo nandoa hetra sy haba momba ny bois de rose ihany koa ity karana ity. Ilaina fanazavana avy aminy izany, avy taiza ary nomena an'iza ireo andramena nolazainy fa novarotany.
Torak'izany koa ny eo anivon'ny Zandarimariam-pirenena, ny Fitsarana manokana miady amin'ny kolikoly, ny Fitsarana manokana momba ny bois de rose, ny Bianco, ny Samifin miady amin'ny famontsiam-bola, olona mitolo-batana dia jerem-potsiny?